निर्माण सुरू गरेको ६ बर्षसम्म पुल बनेन, दोषी डन कि ठेकेदार ? « Sthaniya Khabar
निर्माण सुरू गरेको ६ बर्षसम्म पुल बनेन, दोषी डन कि ठेकेदार ?
प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०७३, शुक्रबार ११:२७
वीपी राजमार्ग निर्माण भएपछि यातायातको पहुँच थोरै भएका ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु लगायतका जिल्लाहरूलाई बरदान सावित भयो । अति विकट मानिने ग्रामिण भेगमा सडक सञ्जाल तीब्र बिस्तार भयो । धेरै ठाउँमा नदीमाथि पुल बन्नुअघि नै पारी सडक बिस्तार भए । यस्तैमध्ये एक रामेछाप र ओखलढुङ्गाको सीमानामा रहेको लिखु खोला पारि सडक बिस्तार भयो । लिखु खोलामा पुल बनि नसक्दै गाम्नाङटार, टारकेराबारी, यसम, पोकली, नर्मदेश्वर, श्रीचउर लगायत गाविसमा सडक बिस्तार हुन थाल्यो ।
सिसिरेको त्यस पुल निर्माणका गर्न सरकारले ६ वर्षअघि ठेक्का लगायो । तर अहिलेसम्म पुल बन्न सकेको छैन । पुल नबनेको बारे जिज्ञासा राख्दा सडक डिभिजन कार्यालय खुर्कोटका इञ्जिनियर राकेश महर्जनले आफू चार महिना अघि मात्रै आएको बताए । चन्दा विवादका कारण सुरूका दुई बर्ष पुल निर्माण रोकिएको भन्ने सुनेको महर्जनले बताए । पछि थपेको म्याद पनि गएको जेठमै सकिएको छ । पछिल्लो समयमा भने नकाबन्दीका कारण निर्माण कार्य रोकिएको ठेकेदारको दाबी छ ।
ठेकेदार ग्याल्बो लामाले पनि डनले चन्दा मागेका कारण निर्माण गर्न नसकेको दाबी गरे । तर डन को हो ? खुलेर भन्न चाहेनन् । डनको नाम ‘अफ द रेर्कड’ भनेर नलेख्न अनुरोध गरे । स्थानीयवासी र उनका अनुसार ती डन अहिले जेलमा छन् । “पहिला पुलको काम मेरो बुवाले हेर्नुहुन्थ्यो । यो पुलको ठेक्का लाग्नसाथ बुवालाई अपहरण गरेर चन्दा मागे” लामाले भने, “ज्यान मार्नेसम्मको धम्कीले बुवाको मानसिक अवस्था नै कमजोर भयो । हामीले काम गर्न सकेनौं ।”
चन्दा नदिए आफ्नो मान्छेलाई काम दिन दबाब दिएको र तत्कालिन डिभिजन सडक प्रमुख यदुकुल गौतमको अगाडी नै ३ वटा कागज गरेको दाबी ठेकेदारको छ । यस्तै समस्यामा २ बर्ष बितेको र बाँकी ६ महिनाको ठेक्का अवधि गिट्टी कुटाउने, जग राख्ने काम गरेको बताए । त्यसबेला आफूलाई धम्की आएको बताए । धम्कीबारे डिभिजन सडक कार्यालयमा गुनासो गर्दा कुनै कारवाही नभएको ठेकेदारको भनाई छ । पछि ती डन अरू नै कारणले जेल परेका थिए ।
“यो पुलमा हाम्रो १ करोड २० लाख रुपैयाँ धितो फसिरहेको छ । २ बर्षमा सकिने काम ६ वर्ष लाउने हाम्रो पनि रहर होइन,” ठेकेदार लामाले भने, “अहिले अवस्था सामान्य बनेको छ, पुलको सामान चाँडो उपलब्ध भए छिट्ट्रै निर्माण सम्पन्न हुन्छ ।” ओखलढुङ्गा क्षेत्र नं. २ का सांसद रामहरि खतिवडाले पुल निर्माणमा अबरोध गर्ने जो कोहीलाई कारवाही गरिने बताए । साथै आफ्नो पार्टीले कुनै पनि किसिमको डनलाई संरक्षण नगरेको पनि दावी गरे । सांसद खतिवडाले डिभिजन सडक कार्यालय ओखलढुंगाका डिभिजन इञ्जिनियर राकेश महर्जन, ठेकेदार र स्थानिय बासिन्दाले पछिल्लो समय चासो लिन थाले पछि पुल निर्माणले गति लिन थालेको छ ।
कहिले निर्माण सम्पन्न हुन्छ ?
इञ्जिनियर महर्जनले पुलको ५० प्रतिशत काम सकिएको बताए । पुलको दुवै पिलर निर्माण भइसकेको छ । पुलको माथी राखिने स्टील ट्रसको डिजाइन भर्खरै स्वीकृत भएको छ । चितवनको जलप नेपाल नामक उद्योगले ट्रस बनाइरहेको छ । पुलको तौल पहिला १८० टन थियो भने अहिले बढाएर १९५ टन पुर्याइएको छ । स्टील ट्रस गह्रौं हुने भएकाले ठूला ट्रकमा ओर्सानु पर्छ । बर्षायाम सुरु हुनु अगावै ट्रस निर्माणस्थल नपु¥याए काम पछि धकेलिन सक्छ । सडक डिभिजन कार्यालय, सांसद र ठेकेदारको लक्ष्य आगामी दशैंमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
तर केही महिनाभित्र उद्योगले ट्रस उपलब्ध नगराए पुल निर्माणमा ढिलाई हुनेछ । आगामी दशैंदेखि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पुरा हुने छैन । पुलको ठेक्का दोलखाको ओम वुद्ध जेभीले पाएको छ । पूलको लागत भ्याट बाहेक ५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ । सिसिरेमा रहेको यस पुलले गाम्नाङटार, टारकेराबारी, यसम, पोकली, नर्मदेश्वर, श्रीचौरलगायत १४ गाविसका २० हजार नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।